Kuvaka Mesh Welding Machine
Isa Mesh Welded Machine
Kusimbisa Mesh Wleding Machine
Animal Yaiba Welding Machine
Security Fenzi Kugadzira Machine
Barbed Wire Kugadzira Machine
Hexagonal Wire Netting Muchina
Chicken waya netting muchina
Yakawedzerwa Metal Mesh Machine
Tarisa pane waya mesh michina yekugadzira
Zvichienderana michina mhinduro neAdvanced weld technology muindastiri
JIAKE Machinery-Yakanakisa mhando chigadzirwa chewaya mesh michina muChina
Makore makumi maviri ekuramba achivandudza ruzivo muwaya mesh michina yekugadzira indasitiri.
Yakapusa maitiro ekugadzirisa kugona kwako chaiko chigadzirwa kudiwa.
Hebei Jiake Welding Equipment Co., Ltd. hwakagadzwa muna 1999 uye iri muna Anping nyika, Hebei dunhu, China. Iyo tambo mesh michina yekugadzira tekinoroji yekushandisa mhinduro mupi uye yakazvipira kupa waya mesh kugadzirisa mhinduro kune vashandisi vepasirese.
Pashure pemakore anopfuura makumi maviri ekuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi, JIAKE michina yave China inotungamira inogadzira waya mesh michina. Mumunda mukuru-mugumo waya pajira riya weredha kugadzira, Jiake michini akagadza ayo vaitungamirira nomoto michina uye nyanzvi. Mumunda waya pajira riya kuruka michini, isu takagadzawo hwakakwana rwokugadzira pezvakaitwa uye nyanzvi basa zvikwata kuburikidza pamwe nevamwe vagadziri.
JIAKE Wires Mesh MACHINERY
Nanganai kupa mhinduro kuti pajira riya nomoto muchina uye pajira riya netting kurukiswa michina.
- Tarisa pakupa mhinduro dzemeshini yekutengesa muchina uye mesh mambure ekuruka michina.
Jiyake Machinery iri nyanzvi R & D, kugadzirwa uye Marketing pamusoro Mesh Welding Machine, Fence Panel welded Machine, Cage Mesh Welding Machine, Akasimbisa Mesh Welding Machine, Wire Mesh Kuita Machine, Chain Link Fencing Machine, Hexagonal Wire Netting Machine, Field Fence Machine, Yakasungwa Wire Machine, Yakawedzerwa Simbi Mesh Mashini, uye Waya Dhirowa Mashini, nezvimwe.
Izvo zvigadzirwa uye matekinoroji awana patent yenyika, uye ane CE chitupa, FTA chitupa, Fomu E, Fomu F mvumo. Iyo muchina pasipoti, yako tsika clearance haizove dambudziko.
KUBVIRA GORE ra1999
VAMWE VATengi vedu
ZVIMWE ZVEDU ZVAKANAKA
Mumisika yemhiri kwemakungwa, JIAKE Machinery yatengesa nyika dzinopfuura zana nematunhu epasirese.
Iyo yepamhepo nhepfenyuro yeJiake Wire Mesh Mac ...